शिक्षक परीक्षाको मिति तय केही दिनमै, लगत्तै खुला विज्ञापन गर्ने तयारी – Famous Nepal
Posted on January 3, 2018 at 1:19 pm by फ्यामोस नेपाल
काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुका लागि खुलेको विज्ञापनको परीक्षा मिति तय चाँडै हुने साथै, लगत्तै खुला विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंगलवार मन्त्रालयमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले शिक्षक परीक्षाको मिति केही दिनमै तयहुने साथै लगत्तै खुला विज्ञापन गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
सचिव रेग्मीले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली समेत छिट्टै संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको भेटमा सहभागी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महासचिव ऋषिराम चापागाईले जानकारी दिए ।
शिक्षा सचिव सँगको भेटमा अहिले स्थानीय तहले कुनै पनि विधि प्रक्रिया नपुर्याइ एकतर्फी मनोमानी ढंगले जारी गर्न लागिएको स्थानीय तह शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन कार्यनिर्देशिका– २०७४ तत्काल जारी नगर्ने र संघिय ऐन यथासिघ्र जारी गरि सोहि अनुसार प्रदेश ऐन बनाऊनु पर्ने तथा प्रदेश ऐनको मातहतमा स्थानीय शिक्षा ऐन लागु गर्नु पर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको र त्यसका लागि शिक्षा सचिवले पहल गर्ने आश्वासन दिएको चापागाईले बताए ।
तत्काल विद्यालय तहमा देखिएका अस्थायी शिक्षक, राहत, विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बाल शिक्षक, तत्कालीन उच्च मा.वि. शिक्षक, दरबन्दी मिलान, शिक्षक बढुवा आदि विषयहरुको सम्बोधन हुने गरी संघिय ऐन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा समेत शिक्षासचिव सकारात्मक देखिएका चापागाईले जानकारी दिए ।
स्थानीयतहले एकतर्फीरुपमा धमाधम शिक्षा सञ्चालनका लागि कार्यनिर्देशिका जारी गरेको भन्दै शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा रहेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघको टोली मंगलवार शिक्षासचिवलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेको थियो ।
वाम सरकारको बाटोः समाजवाद कि दलाल पुँजीवाद ?
३ पुस, काठमाडौं । अनौपचारिक संवादमा प्रतिनिधिसभातर्फ एमाले उम्मेदवार बनेकी एक नेतृलाई सोधियो, ‘पैसा कति खर्च हुनेरहेछ, चुनावमा ।’ उनको…